Fitiavana radika - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2014-03 mpandimby ny Magazine > Fitiavana fitiavana
Ny fitiavan’Andriamanitra dia fahadalana. Tsy izaho no manao izany, fa ny apostoly Paoly. Ao amin’ny taratasiny ho an’ny fiangonana tany Korinto i Paoly dia nanoratra fa tsy tonga hitondra famantarana ho an’ny Jiosy na fahendrena amin’ny Grika izy, fa hitory ny amin’i Jesosy nohomboana tamin’ny hazo fijaliana. "Fa izahay kosa mitory an'i Kristy voahombo tamin'ny hazo fijaliana, fahatafintohinana amin'ny Jiosy ary fahadalana amin'ny jentilisa."1. Korintiana 1,23).
Raha ny fijerin’ny olombelona dia tsy misy dikany ny fitiavan’Andriamanitra. “Fa ny teny ny amin’ny hazo fijaliana dia. Ho an'ny sasany dia hadalana izany, ho an'ny hafa ny zavakanto maoderina dia hadalana ho an'ireo izay very »(1. Korintiana 1,18). Ho an’izay tsy mahalala fa ny teny amin’ny hazo fijaliana dia tenin’ny fitiavan’Andriamanitra, dia hadalana ny mino fa Andriamanitra no namonjy antsika tamin’ny fahafatesany. Ny fitiavan'Andriamanitra dia toa tsy takatry ny saina, tsy mitombina, tsy misy dikany, tsy misy dikany.
Avy amin'ny voninahitra mankany amin'ny loto
Alao sary an-tsaina hoe miaina ao anatin'ny lavorary tonga lafatra ianao. Izy ireo no ohatra ahitana firaisana sy fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny fiainanao dia fanehoam-pitiavana, fifaliana sy fandriam-pahalemana ary manapa-kevitra ny hanova izany tampoka ianao.
Vao avy niresaka ny fanombohan'ny famoronana aho tamin'ny fotoana niainan'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ao anatin'ny firindrana tanteraka sy amin'ny firaisana tanteraka. Fanahy izy ireo, tanjona ary firehetam-po ary ny fisiany dia aseho amin'ny alalan'ny fitiavana, fifaliana ary fandriampahalemana.
Avy eo izy ireo dia nanapa-kevitra ny hanitatra ny vondron'izy ireo amin'ny alàlan'izy ireo hizara ny maha-izy azy amin'ny olona tsy misy. Ka manangana ny zanak'olombelona izy ireo ary antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ry lehilahy sy vehivavy, izaho sy ianao, mba hananantsika fifandraisana mandrakizay amin'izy ireo. Na izany aza, namorona anay miaraka amin'ny zohy iray izy ireo. Tsy tian'izy ireo hofaritana hoe ahoana no tokony hitondranay toetra, mba hananantsika fifandraisana aminy, fa tian'izy ireo ny hisafidy izany fifandraisana izany amin'izy ireo. Izany no antony nomen'izy ireo ny safidiny manokana hanapa-kevitra ny hananantsika fifandraisana aminy. Satria nanome izany safidy izany izahay dia fantatr'izy ireo fa handray fanapahan-kevitra ratsy ny ankamaroan'ny olona. Izany no antony nametrahany drafitra. Tsy plan B, fa planina. Io drafitra io dia ny hahatongavan'ny Zanak'Andriamanitra ho olombelona ary ny Zanak'Andriamanitra dia maty ho an'ny zanak'olombelona teo amin'ny hazo fijaliana. Ho an'ny ankamaroan'ny olona dia hadalana izany. Fitiavana mahery vaika izany.
Vao tsy ela izay aho no nitsidika firenena iray tany Azia, izay ivavahan'ny olona andriamanitra an-jatony. Ny mpino dia mandany ny androm-piainany manontolo mba hahazoana antoka fa amin'ireny andriamanitra ireny dia amin'ny fanahy tsara. Miezaka ny hitazona ny andriamanitra amin'ireny andriamanitra ireny mba tsy ho voaozona izy ireo. Nandany ny androm-piainany manontolo izy ireo matahotra sao tsy mahomby izy ireo. Ny hevitra hoe ny iray amin'ireo andriamanitr'izy ireo dia tonga olombelona ary hanampy azy ireo amin'ny fitiavana dia hevitra feno hadalana ho azy ireo.
Tsy heverin’Andriamanitra ho adala anefa izany. Mifototra amin’ny fitiavana ny fanapahan-keviny, satria tena tia antsika izy ka nandao ny voninahiny ary tonga lehilahy jiosy tamin’ny fahatanorany: “Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika” (Jaona. 1,14). Toa hadalana ny fitondran-tenan’Andriamanitra toy izany. Fitiavana mahery vaika izany.
Amin'ny maha-olombelona anao, niara-nipetraka tamin'ny mpanjono sy mpamory hetra Andriamanitra, olon-tsotra ary izay voaroaka tao anatin'ny fiaraha-monina. Niara-niasa tamin'ny boka, tamin'ny demoniaka, ary tamin'ny mpanota izy. Ny manam-pahaizana ara-pivavahana dia niantso azy ho adala. Fitiavana mahery vaika izany.
Ny toko fahavalo ao amin'ny Filazantsaran'i Jaona dia mitantara ny amin'ny vehivavy iray izay tratra tamin'ny fitaka ary nentin'i Jesosy. Te handray ny hitora-bato azy ny manam-pahaizana ara-pinoana, nefa i Jesosy kosa nilaza fa ilay olona tsy meloka dia tokony hanipy ny vato voalohany. Ny vondron'olona izay nangonina ho amin'ilay fampisehoana dia nanjavona ary i Jesosy, ilay hany tena tsy meloka dia nilaza taminy fa tsy hitsara azy ary milaza azy tsy hanota intsony. Hadalana ho an'ny olona maro ity fihetsika ity. Fitiavana mahery vaika izany.
Jesosy dia nampiantranoin'ireo mpanota tao an-trano. Nilaza ny manam-pahaizana ara-pivavahana fa adala ny miara-misakafo amin'ny olona meloka satria tsy madio sy madio izy. Ny fahotanao dia misy fiantraikany aminy ary ho toa anao izy. Fa ny fitiavana radika dia mifanohitra amin'izany fomba fijery izany. Jesosy, Zanak’Andrimanitra sy Zanak’olombelona nandritra ny fotoana izay, dia namela azy hosamborina sy hampijaliana ary hovonoina mba hahafahantsika nohavaozina aminny rany nalatsaka, voavela heloka ary nifanaiky tamintsika indray ny fiainantsika. Nentiny tao daholo ny fahalotoantsika sy ny hadalany ary nodiovintsika teo anoloan'ilay Raintsika any an-danitra. Fitiavana mahery vaika izany.
Nalevina sy natsangana tamin’ny maty tamin’ny andro fahatelo Izy mba hahazoantsika famelan-keloka sy fanavaozana ary firaisana aminy, fiainana feno fahafaham-po. Hoy izy tamin’ny mpianany: “Amin’izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin’ny Raiko, ary ianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo”. (Jaona 14,20). Toa fanambarana adaladala izany, fa fitiavana mahery vaika, fiainana mahery vaika. Avy eo dia niakatra tany an-danitra izy, satria Andriamanitra manan-karena amin’ny famindram-po sy tia antsika tamin’ny fitiavany lehibe, “isika izay efa maty tamin’ny ota koa, dia niara-belona tamin’i Kristy, ary ny fahasoavana no namonjena anareo; ary niara-nitsangana tamintsika sy nampitoetra antsika any an-danitra ao amin’i Kristy Jesosy” (Efesiana 2,4- iray).
Rehefa mpanota isika - talohan'ny nahafahantsika namantatra sy nibebaka ny fahotantsika - dia nandray sy nitia antsika Andriamanitra.
Fitiavana mahery vaika izany. Amin’ny alalan’i Jesosy, Zanak’Andriamanitra, isika dia anisan’ny fitiavana an’Andriamanitra. Andriamanitra Ray dia nametraka antsika teo anilan'i Jesosy ary manasa antsika hanana anjara amin'ny ataony. Mamporisika antsika izy hizara izany fitiavana sy radikaly namboarin'i Jesôsy izany ary mitarika antsika amin'ny alàlan'ny olona hafa. Ny hadalan'Andriamanitra dia fahadalana ho an'ny maro. Drafitra izay mampiseho fitiavana feno radika.
Ao amin’ny fandikan-teny hoe Fiainana Vaovao (Ny Baiboly) dia milaza hoe: “Mifampitondra tahaka ny nampianarin’i Kristy anareo. Na dia Andriamanitra aza izy, dia tsy nanizingizina ny amin’ny zony masina. Nafoiny ny zavatra rehetra; nitana ny toeran’ny mpanompo ambany izy ka teraka sy nekena ho olombelona. Nanetry tena izy ka nankatò hatramin’ny fahafatesana, ary maty toy ny jiolahy teo amin’ny hazo fijaliana. Izany no nanandratan’Andriamanitra azy ho any an-danitra sy nomeny anarana ambony noho ny anarana hafa rehetra. Eo anatrehan’izany anarana izany no tokony handohalehan’izay rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany ary any ambanin’ny tany. Ary ho voninahitr’Andriamanitra Ray, dia hanaiky ny olona rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo » (Filipiana). 2,5-11). Fitiavana mahery vaika izany.
Maty ho an'ny zanak'olombelona rehetra i Jesosy dia noho ny fitiavana toa adala. Nanasa antsika hizara an'io fitiavana io izy, izay toa tsy mitombina indraindray fa manampy ny hafa hahatakatra ny fitiavan'Andriamanitra. Te homeko ohatra momba an'io fitiavana radikaly io ianao. Manana sakaiza pasitera ao Nepal izahay: Deben Sam. Saika isan-kerinandro aorian'ny serivisy dia miditra ao an-tanàna i Deben, izay misy tobim-pitsaboana ho an'ny mahantra indrindra amin'ny mahantra ao Kathmandu ary toerana anaovana fitsaboana maimaim-poana. Deben dia nanangana tetik'asa momba ny tanimbary akaiky ho an'ny vondron'olona sy ny kamboty ary eto izy no mitory ny filazantsara. Vao haingana dia niondrana an-trano i Deben, nokapohina tamin'ny fomba mahery setra ary voampanga ho mitondra fanantenana diso ho an'ny mponina ao an-tanàna. Nendrikendrehina ho nahatonga fandotoana ara-pivavahana izy - adala ho an'ny olona tsy mahalala ny vaovao tsara amin'ny hazo fijaliana ny teniny.
Deben, izay efa tafaverina tamin'io fanafihana io, dia tia ny olona amin'ny fomba miezinezina amin'ny alàlan'ny filazala azy ireo ny fitiavana nasain'i Andriamanitra hizara amin'ny olon-drehetra, eny fa na ny fahavalontsika aza. Amin'izany no anolorantsika ny aintsika manokana ho an'ny ain'ny hafa.
Ny fizarana ny vaovao mahafaly momba ny hazo fijaliana dia ahitana koa ny fizarana ny traikefa fa ny fitiavan'i Jesosy Kristy dia miovaova sy miova. Ny kristianisma dia mifototra amin'io fitiavana manome an'i Jesosy sy ny mpanara-dia io. Fitiavana adala izany ary indraindray tsy misy dikany amin'ny fomba fijerin'olombelona. Fitiavana izany ka tsy azontsika ny saintsika fa ny ao am-pontsika ihany. Fitiavana mahery vaika izany.
Ny Paska dia momba ny fitiavan-dray ny zanany rehetra, eny fa na dia ireo tsy mahalala fa zanak'andriamanitra izy ireo. Nomen'ny ray ny zanany lahy. Nanolotra ny ainy ilay zanakalahy. Maty ho an'ny olona rehetra izy. Nitsangana ho an'ny olona rehetra avy any amin'ny fanjakan'ny maty izy. Ny fitiavany dia ho an'ny olona rehetra - izay mahalala azy sy izay mbola tsy mahalala azy. Fitiavana mahery vaika izany.
by Rick Schallenberger